Musi waKurume 10, 1893, Mutungamiri weFrance akasayina mutemo wekugadzira iyo colony yeCôte d'Ivoire - Afrikhepri Fondation
Mutungamiri Sadi Carnot
Liye Kurume 10, 1893, mumwe Sadi Carnot, aimbova purezidhendi weFrance, akasaina chisungo chekugadzira koloni yeCôte d'Ivoire. Zvakasarudzika, ini ndinounza uyu mutemo uyo unogara usingazivikanwe kwenguva yakareba.
Iwo makoloni eFrance Guinea, Ivory Coast neBenin anoumba matatu matatu akasiyana ayo anovengwa pakati pemakorona eboka rekutanga akarongwa nechinyorwa 4 chemitemo yaFebruary 2, 1890.
Kutonga kwepamusoro kweimwe yeaya makoloni anoiswa kuna gavhu anobatsira nemunyori mukuru.
Magavhuna eFrance Guinea, Côte d'Ivoire neBenin vanoshanda mukati menzvimbo dzavo, masimba akatemerwa nezvirevo nemirau musimba, uye kunyanya neconic organisation yaSeptember 7, 1840.
Gavhuna weFrance Guinea ndiye ane basa rekuchengetedza hutongi hwevadzvanyiriri pamusoro peFouta-Djalon nenzvimbo dzakavakidzana. Gavhuna weCôte d'Ivoire ndiye anotungamira basa rekuchengetedza iro rakadzivirirwa pamusoro penzvimbo dzeKong nedzimwe nzvimbo dzeNiger loop. Zvisinei, nyika dzaSamory naTiéba dzinoramba dziri pasi pechigaro chemutungamiriri mukuru weFrance Sudan. Kuitwa kwehurumende yeBenin kuchawedzera kune zvese zvinogadzirwa zvinosanganisirwa pakati pechirungu cheLagos neGerman koloni yeTogo uye kumatunhu ekunze.
Basa rehupfumi rinopiwa mune imwe neimwe yemakoloni nemubhadhari-mubhadhari.
Zvese zviga zvinopesana nechisungo ichi zvinodzikiswa.
NB: Mutemo waGunyana 7, 1840 zvine chekuita neSenegal uye kutsamira kwayo kwaive kuchishandiswa kuCôte d'Ivoire. Iyo koloni yaizotongwa nagavhuna nemisoro miviri yekutonga ichibatsirwa nebhodi revatungamiriri (iwe unoverenga izvo, Lol). Dare iri raive rakaumbwa nemubati, ivo vaviri vakuru vevatariri uye maviri akakosha.
NaAndré Silver Konan (Wenhau-munyori)